Nepal Auto दाउन्ने तिमी कहिले सुध्रिन्छौ ? - Nepal Auto
दाउन्ने तिमी कहिले सुध्रिन्छौ ?
दाउन्ने भन्ने बित्तिकै हामी सबैको मनमा एउटा तरङ्ग पैदा हुन्छ, त्यो तराईको बीचमा उकाली ओराली अनि लामो जाम । तराईको बीचको पहाड । अझै रोचक त हाल नेपाल संघीय राज्यमा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा पूर्व पट्टिको भाग गण्डकी प्रदेशमा पर्दछ भने बीच तिरबाट पश्चिम पट्टिको भाग लुम्बिनी प्रदेशमा पर्दछ ।
नेपालभरकै दुर्घटनाको तथ्यांकलाई ओैंल्याएर हेर्ने हो भने दाउन्ने यस्तो ठाउँ हो जहाँ अत्याधिक रुपमा साना तथा ठुला दुर्घटना हुने गर्दछन् । प्रायः हामीले गर्ने यात्रामा भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधन त्यसमा पनि मालबाहक ट्रकहरु पर्ने गरेको देखिन्छ । हामीले कैयन पहिले देखि दाउन्नेलाई धुलो, घुमाउरो र जामै जामको नागवेली बाटोको रुपमा लिने गर्दछौं । कैयन सवारी साधनलाई अस्तब्यस्त बनाउने दाउन्ने सुध्रिएको हेर्ने कसलाई रहर छैन होला र ?
राजा महेन्द्रको पालामा वि.सं. २०१९ बैशाख १ गते उद्घाटन गरेर २ लेनको बनाइएको यो बाटो पुनः यसै शताब्दीमा आएर चार लेनको बनाउने उद्देश्यका साथ २०७५ चैत ८ गते सम्माननिय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गर्नुभएको थियो । अलिक महंगो बजेटको भएको कारणले पनि नारायणगढ–बुटवल सडकखण्डको टेन्डर चिनियाँ निर्माण कम्पनी ‘चाइना स्टेट इन्जिनियरिङ कम्पनी’ ले ग्लोबल टेन्डरमार्फत टेन्डर हात पारेर काम सुचारु गरेको हो ।
बुटवल–नारायणगढ सडक खण्डको लागत रु १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख बराबरको छ भने जम्मा ११५ किमी लम्बाई रहेको छ । शुरुवात गरेको ४२ महिनामा सक्नु पर्ने गरी काम थालनी भए पनि हाल सम्म निर्माण कम्पनी तथा सडक डिभिजनको तथ्यांकका अनुसार ४ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको छ । विगत २ बर्ष देखि नारायणगढ–बुटवल जोड्ने सडक चौडा गर्ने काम त भएको छ तर कछुवाको गतिमा । सम्बन्धित निकायलाई प्रश्न गर्दा निर्माण कम्पनीले बनलाई दोष लगाउने, बनले बिद्युतलाई दोष लगाउने, बिद्युतले सरकारलाई दोष लगाउने । आखिर सबै सरकारका अंगहरुको आरोप प्रत्यारोपका वीच विगतको १ बर्ष त्यत्तिकै बित्यो ।
त्यसै क्रममा कोरोना महामारी बनेर आयो । रोग भन्दा हल्ला बढी फैलाउने काम भयो । तर पनि त्यस बखत पनि कैयन पुलहरु बनिसकेको र बनिरहेको अवस्था भने हो ।
यदि नेपाल सरकारले आम नागरिकको पिडा बुझ्ने हो भने चिनियाँ कम्पनीसँगको समन्वयमा सर्बप्रथम धेरै निर्माण व्यवसायीलाई किलोमिटरको हिसाबले काम दिएर भए पनि दाउन्नेको बाटो बनाउनु पर्ने देखिन्छ । आम नागरिकले पाएको सास्ती वर्णन गरेर नसकिने अवस्थामा व्यवसाय, जागिर गर्ने तथा विरामी परेर छिटो वारपार गर्छु भन्ने सोच राखेर हिडियो भने कति बेला गन्तव्यमा पुगिने हो कुनै निश्चित छैन । मैले यात्रा गर्दै गर्दा इमर्जेन्सीको साइरन बजाउदै सेतो एम्बुलेन्स जाममा लाइन बसेको देखेर आफैलाई नरमाइलो लाग्यो । हामी कतै योजनाविहीन काम गरेर राष्ट्रलाई नै गिज्याईरहेका त छैनौं ? विगतमा मुग्लिन सडक खण्डले पनि यसै गरि तर्साउने गर्दथ्यो अहिले दाउन्नेको उकालोले तर्साउँछ । कुनै पनि विकास हुनु पूर्व केही न केही ध्वंस हुन्छ त्यो स्वभाविक प्रक्रिया हो तर यसरी अस्तव्यस्त तवरबाट बाटो निर्माण गर्दा निकै धेरै सास्ती आम नागरिकलाई भएको छ ।
हिन्दु ग्रन्थ अनुसार दाउन्नेदेवी मन्दिर पनि त्यस क्षेत्रमै पर्ने हुँदा हामी छिटो काम सक्ने सद्वुद्धि भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयलाई दिनको लागि अनुरोध गर्न सक्छौ । हाम्रो यात्रामा आफ्नो निजी सवारीलाई ध्वस्त बनाउदै जय जय दाउन्नेदेवी भन्दै चलाउनुको विकल्प दिलाईदेउ । एउटा गाडीमा सानो समस्या देखा पर्ने बित्तिकै दोहोरो तर्फ सयौं गाडीको लाम लाग्ने अवस्थाको अन्त्य छिट्टै नै हुनु आवश्यक भइसकेको छ ।
भारतमा सस्ता मुल्य पर्ने गाडी सरकारको भन्सार महसुलकै कारणले गुणात्मक रुपमा नेपालमा महंगो पर्न जान्छ र पनि नेपाली प्रयोगकर्ताले सवारी साधनको प्रयोगलाई तीव्रता दिएकै पाइन्छ । सवारी धनीले बर्ष–बर्षमा सडक दस्तुर बुझाएकै हुन्छन् । सरकाले तोकेको समयमा १ दिन ढिला भयो भने जरिवाना सहित पनि तिरेकै हुन्छन् तर त्यही सडक कर तिरेर आफ्नो रगत पसिना गरेर महंगो मूल्यमा खरिद गरेको बाटोले गाडीमा भएको क्षतिपूर्ति पाउन सकिदैन ।
म एउटा आम नागरिकको हिसाबले सरकारसँग कुनै गुनासो छैन किनकी क्षमता अनुसारको काम गरेकै छ । ग्लोबल टेन्डरमा काम भइरहेको अवस्थामा यदि कानुनी हिसावबाट मिल्ने भए त नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले यस सम्बन्धी योजना पेश गरोस् र छिट्टै सडक निर्माण सक्ने वातावरण बनोस् ।
यस्तै सपना देख्दा देख्दै २ घण्टा ३३ मिनेटमा जाम खुलेछ र साइडको गुरुले ‘ओ दाइ उठि हाल्नुस् जाम खुलेछ रे’ भन्दा पो झसङ्ग भए ।
मैले देखेको सपना अबका दिनमा कसेैले देख्न नपरोस् र दाउन्नेको निर्माण कार्य छिटो छरितो तवरले भएको देख्न र भोग्न पाइयोस् । यही छ कामना ।
- धनिराम भुसाल